ကာရံဆူး ၏ စုံစီနဖာ အပိုင်းအစများ...: August 2009
ဆရာဝန်နားနေခန်းထဲမှာ ဟန်သစ်ထူးအသံက အာကျယ်ကျယ်နဲ့ ပြောနေတာမို့ သူ နည်းနည်း နားစွင့်မိတယ်…“ ဟေ့ကောင်တွေ… အမိစားလေးကွ..ရောက်လာရင်တော့ ငါကတော့ လုံးမှာပဲ…မင်းတို့တွေ မကပ်နဲ့နော်..” မနက်ဖြန် ရောက်လာမယ့် ဆရာဝန်မ အသစ်အကြောင်းကို အာပေါင်အာရင်း သန်သန် ပြောနေတာကို နားကြားပြင်းကတ်သလို ရွံလည်း ရွံမိတယ်… ဆရာဝန်လောကမှာ ဒီလိုကောင်မျိုး ရှိနေတာ တော်တော် စိတ်ပျက်စရာ… ဆက်နားမထောင်ချင်တော့တာနဲ့အပြင်ပဲထွက်လာ လိုက်တယ်… သူလိုလူက မိန်းမတွေကို စိတ်မ၀င်စားသလို ကိုယ့်အလုပ်ကလွဲရင် ဘာကိုမှ စိတ်မ၀င်စား မစပ်စု တတ်သူ… စိတ်မ၀င်စားဆို သူကလည်းသူ့ အကြောင်းနဲ့ သူမို့ လောကကြီးမှာ အံဝင်ဂွင်ကျဖို့ ဆိုတာ သူ့အတွက် နည်းနည်းတော့ ခက်ခဲလိမ့်မယ်.. ဒါပေမဲ့ သူ့ အလုပ်ကိုတော့ သူချစ်တယ်…လူနာတွေကိုလည်း အမြဲစိတ်ရှည် စေတနာ ထားတယ်…
ကားသံကြားလို့ မသိမသာ ကြည့်မိတော့ အသားဖြူဖြူ မျက်ဝန်းညိုညို ဆံနွယ်လေးတွေ ခွေခွေခေါက်ခေါက် နှာတံလုံးလုံးလေးနဲ့ ချစ်စရာ မျက်နှာလေးတစ်ခုကို စတွေ့ ရတယ်… သူ့အပြုံးလေးတွေက အပြစ်ကင်းသလို ရယ်လိုက်ရင် ပါးချိုင့်လေးတွေ ခွက်သွားတာက သူ့ ရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုပြီးပီပြင်စေတယ်…သူသတိလက်လွတ် ကြည့်နေချိန် ကောင်မလေး ပြုံးပြီး ငဲ့အကြည့် နဲ့သွားတိုးတော့မှ ကမန်းကတန်း သူ့ အကြည့်လွှဲပြီး ဆေးလိပ်ကိုပဲ ဖိပြီး ဖွာလိုက်တယ်… ငါဘာလို့ ငေးမိလိုက်ပါလိမ့်… မင်းဘာတွေတွေးနေတာလဲ သက်မင်းမောင်..ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်သတိပေးရင်း.. သက်ပြင်းဖွဖွ ရှိုက်လိုက်တယ်… အညိုရေ မင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် မောင်အစကတည်းက သက်ပြင်းတွေချလာရတာပါကွာ…
ဟိုကောင် ဟန်သစ်ထူးကတော့ ပြောထားတဲ့ သူ့ အကြံတွေ အကောင်းအထည်ဖော်နေလေရဲ့ … ကိုယ်ကလည်း ဖာသိဖာသာ နေတတ်တဲ့သူ.. မမြင်ချင်ရင် မကြားချင်ရင် ရှောင်သွားလိုက်တာပါပဲ…ဟို ထုံပေပေ ကောင်မလေးကလည်း ဟန်သစ်ထူးကို ကယ်တင်ရှင် အမှတ်နဲ့ ကူညီတာကို ကျေးဇူးတွေ တင်လို့ …. ကောင်မလေးရဲ့ ရိုးသားမှုကို အခွင့်ကောင်းယူချင်နေတဲ့ ဟန်သစ်ထူး ခွင်တွေ့ သွားပုံရတယ်… အညိုက စာထည့်ချင်လို့ အကူအညီတောင်းနေသံကို ဧည့်ခန်းထဲက သူကြားဖြစ်အောင် ကြားလိုက်သေးတယ်… အစကတော့ ဒီကောင် ဟန်သစ်ထူးအကြောင်းမသိပေမဲ့ အခုတော့ သူ့အကြောင်းတွေ သူ့အပေါင်းအသင်းတွေက ဘယ်လိုဆိုတာ ရိပ်မိပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်လို့ ဘာမှ မဝေဖန်ခဲ့ဘူး… ဒါပေမဲ့ အညို့ ကိုတော့ ဒီကောင်နဲ့ ပါမသွားစေချင်ဘူး… ဒါကြောင့်လည်း မနက်စောစော ထပြီး အညို့အခန်းနားမှာ ရစ်သီရစ်သီ စောင့်နေလိုက်တယ်… နတ်သမီးလေး တစ်ပါးလိုလှပြီး ကလေးတစ်ယောက်လို အပြစ်ကင်းလွန်းတဲ့ အညို့ ကို ဟိုကောင်တွေ ပရောပရီလုပ်တာ ပြီတီတီ ကြည့်မှာ စကားတွေနဲ့အသားယူမှာကို ကိုယ်မလိုလားဘူး…ဟိုကောင်ပြောတာ ကြည့်လေ…ညက သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို ချိန်းတော့ ငါ့ကောင်မလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်တဲ့….မဖြစ်ဘူး…အညို့ ကို ကြည့်တော့လည်း ဒွိဟဖြစ်နေတဲ့ အူတူတူပုံ..
ဒါနဲ့ ကိုယ်လည်း မနေနိုင်ဘူး ဘာမှလည်း မတွေးအားဘူး…ဖြတ်ခုတ်တယ်ပဲ ပြောပြော ..အညို့ ကို ဒီကောင်နဲ့ တော့ မထည့်နိုင်ဘူး…ထူထူပူပူနဲ့ ကိုယ်လဲ စာသွားထည့်မယ်လို့ ညာလိုက်မိတယ်..အညို့မျက်လုံးလေးတွေ လက်သွားတယ်… မောင်လည်း ဘာကို ပျော်မှန်းမသိ ပျော်သွားတယ်… ဟိုကောင် ဟန်သစ်ထူးကတော့ တော်တော်လေး မကျေမနပ် ဖြစ်သွားပုံရတယ်….
လမ်းတလျှောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် မလုံသလို ခံစားရလို့ အညို့ ကို ဘာစကားမှ မဆိုဖြစ်ဘူး…အညို့ပုံကလေးလဲ ရှက်သလို ကြောက်သလိုနဲ့ …မျက်လုံး အ၀ိုင်းသားလေ…သူကတော့ ဘယ်တော့မှ စကားစပြောမယ့် ပုံတော့ မပေါ်ဘူး… ထားလိုက်ပါလေ… ဒီအတိုင်းလေးပဲ ကောင်းပါတယ်…အညို့ ကို ဟိုကောင့်လက်က လွတ်အောင် ခေါ်လာဖို့ သာ အဓိကပါ…ကျန်တာတွေ မောင်ဘာမှ မျှော်လင့်လို့မရတဲ့ ဘ၀ပါ… မောင့် အခြေနေက အညို့ကို အဝေးကနေပဲ ငေးကြည့်ရုံ အပြင် ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ…အညိုရယ် မောင်ဘာတွေ ဖြစ်နေပြီလဲ…ရင်မှာလည်း ဟာတာတာနဲ့ …
စာတိုက်ရောက်တော့ သူစာထည့်နေတာလေးကို မသိမသာကြည့်ရင်း စာတိုက်ထဲ ပတ်နေလိုက်တယ်… တော်ကြာ စာမထည့် ဘူးလားလို့ မေးနေရင် အဖြေမရှိလို့ ပါ….သူ့ ကို ကမန်းကတန်း ပြီးရင် သွားမယ်လို့ပြောလိုက်တာ ကြာနေရင် မောင့် အလိမ်တွေ ပေါ်ကုန်မယ်…ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ အဖြေကို မောင်ဆက်မတွေးရဲဘူး…ဖြေလည်း မဖြေနိုင်သေးဘူး…
ညကနိုက်ဂျူတီလည်းဖြစ် မနက်ကလည်း အညို ဟိုကောင်နဲ့ ထွက်သွားမှာ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ကောင်းကောင်း မအိပ်ခဲ့တော့ ဦးလေးမောင်တို့ ကားပေါ်ရောက်တော့ မောင်ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘူး….အညို ကလည်း မောင်ကို မနှိုးခဲ့ဘူးနော်…သြော်…သနားစရာ ကောင်းလိုက်တာ…အညိုရယ်…
မောင်လေ အညို နဲ့ ဆက်ကြာကြာ မနေနိုင်တော့လို့ ဦးအောင် နှုတ်မဆက်ပဲ ပြန်လာတာပါ… မောင့်စိတ်တွေ ဘယ်လိုမှ ချုပ်လို့ မရမှာကို မောင် ကြောက်တယ်… ဖြစ်နိုင်ရင် အညို့ နားကနေ အငွေ့လေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်လိုက်ချင်တယ်…မောင် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်နေတာတွေကို အညို့ ကို မမြင်စေချင်ဘူးလေ…
အိမ်ရောက်တော့ ဟန်သစ်ထူးလည်း ပြန်မရောက်သေးတာမို့ ကိုယ့်ကို စကားနာ ထိုးမဲ့သူ မလာခင် စောစော အိပ်ယာဝင် လိုက်တယ်… ဒီအချိန်ထိဆို ဒီကောင် ပြန်လာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး…အိပ်ယာထဲမှာ အတွေးတွေ ဟိုတစ ဒီတစ နဲ့ သက်ပြင်းတွေသာ အဖော်ပြုလာတာ ညလယ်တောင် ရောက်မှန်း မသိရောက်လာတယ်…ကားပေါ်မှာသာ ခဏလေး ငိုက်ပြီး အခုတော့ ကိုယ့် အကြောင်း အညို့ အကြောင်း စဉ်းစားရင်း မျက်စိတွေ ကြောင်သွားတာ ဘယ်လိုမှ အိပ်မပျော်ပဲ ရှိတုန်း… တံခါးခေါက်သံ တိုးတိုးလေး..ဒါဟိုကောင်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး…ဒီကောင်က နေ့ ရယ် ညရယ်သိတာ မဟုတ်…ဘာလုပ်လုပ် ၀ုန်းဒိုင်းလုပ်တတ်တဲ့ကောင်…ဘယ်သူပါလိမ့်လို့ ကိုယ် တံခါးသွားအဖွင့်…ဟင်…ချစ်ရတဲ့အညိုရယ်… မျက်ဝန်းမှာလည်း မျက်ရည်တွေနဲ့ လူကလည်း တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့မောင် ပြာလောင်ခတ်သွားတယ်… အညို အပူရှပ်ပြီး ဖျားသွားတာတဲ့… အညို့ ကိုလည်း တအား ဖက်ထားပြီး အားပေးချင်လိုက်တာ…ဒါပေမဲ့ မောင် ဒီလောက်တော့ အသိရှိပါတယ်...မောင့်အစား မောင့် အနွေးထည်လေးက အညို့ ကို နွေးထွေးမှုတွေ ပေးမှာပါ… ဆေးမသောက်ရသေးတဲ့ ဆရာဝန်မလေးကို မောင် ဆေးတွေပေးရင်း စိုးရိမ်စိတ်ကတော့ မပြေသေးဘူးပေါ့…. ဒါကြောင့် အညို့ အခန်းတံခါးကို Lock မချခိုင်းတာ… အညို ၀င်သွားတော့ မောင်လည်း အိပ်မရတာနဲ့ အဆောင်ရှေ့ ကွပ်ပျစ်မှာ အညို့ ကို စောင့်ကြည့်ရင်း ခဏမှေး လိုက်မိတယ်…
မနက် အစောကြီးထ အညို့ အတွက် ကော်ဖီနဲ့ မုန့် လုပ်ပေးခဲ့တယ်… အညိုသက်သာရဲ့ လား မေးချင်ပေမဲ့ အညို အိပ်နေတာ မနှိုးရက်တာ နဲ့ မောင် ဆေးရုံကိုပဲ သွားလိုက်တယ်…. နေ့ လည် ထမင်းစားချိန် မြန်မြန်ရောက်ပါတော့… မောင် အညိုကို သတိယနေတာလေ… မောင်လေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းနေရင်းကပဲ မောင့်စိတ်တွေ အထိန်း အကွပ်မဲ့နေတယ်…ရင်ထဲက အနာဟောင်းရဲ့ အရှိန်ကြောင့် မောင့်နှုတ်ဖျားတွေက မ၀ံ့မရဲ ကတုန်ကယင်နဲ့ အညိုလေးဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်… အညိုရဲ့ အသံလေးကြည်နေတော့မှ မောင် စိတ်အေးသွားတယ်.. ညနေပြန်တော့ အညို က အဆောင်ရှေ့မှာ ရပ်နေတယ်…အညို မောင့်ကို စောင့်နေတာများလား… မတွေးရဲ တွေးရဲနဲ့ အရဲစွန့် ပြီးတွေးမိတာပါ… ဟိုကောင် ဟန်သစ်ထူး ပြောတာ ကြားဖူးလို့အညိုက ဆေးလိပ် အရက် သောက်တာ မကြိုက်ဖူးဆိုတာ မောင်သိတယ်..ဒါကြောင့်လဲ ဘယ်တွန်းအားတွေနဲ့ မျာ့း အညို့ ကို မြင်တာနဲ့ မောင် ဆေးလိပ်ကို အလျင်စလို လွှင့်ပစ်လိုက်မိလဲမသိဘူး…ဒါတွေဟာ မောင့်စိတ်မှာ အညိုပဲဆိုတာ မောင့်ကိုမောင် မသိလိုက်ခင်မှာပဲ..အညိုဘက်က ဘယ်လိုမှ စည်းရုံး သိမ်းသွင်းမှုမပါပေမဲ့ မောင့်နှလုံးသားက အလိုလို နာခံ ခေါင်းငုံ့ လျက်သား ဖြစ်နေပြီလေ….မောင် အညို့ ကို ရင်မဆိုင်ရဲဘူး…မောင့်ကိုယ်မောင် အပြစ်ရှိသူလို့ ခံယူထားမိလို့ အညို့ အတွက် ၀ယ်လာတဲ့ ညှပ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်လေးကို မောင်ကျော်နဲ့ ပဲ ပေးခိုင်းလိုက်တယ်… အညိုရယ် မောင့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ… အညိုကို မြင်ရင် မောင် တွယ်တာသထက် တွယ်တာလာမှာ…အညို့ ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်လာမှာ…ဟင့်အင်း…မဖြစ်သင့်ဘူး.. အညို့ ကို မောင် တန်ဖိုးထားတာ..မောင်လို လူတစ်ယောက်ကြောင့် အညို့ ဘ၀ မညစ်နွမ်းစေချင်ဘူး….
နောက်နေ့ တွေမှာလည်း အညို့ ကို မောင် တတ်နိုင်သလောက် မရှောင်ချင်ပဲ ရှောင်နေခဲ့တယ်…ဒါပေမဲ့ အညို့ အပြုံးလေးတွေကိုတော့ မောင် တိတ်တိတ်လေး ခိုးကြည့်ခွင့်ပေးပါနော်…ဒါပေမဲ့လည်း အညိုရယ် မောင်ကိုယ်တိုင်က အညို့ နားမှာ နေချင်နေတော့ မောင် ကြာကြာ ဟန်မဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး… တခြားသူတွေနဲ့ ရယ်ရယ်မောမော မရှိပေမဲ့ အညိုနဲ့ ကျတော့ မောင့်စိတ်ကိုက ပျော်နေ လိုက်တာ… စကားတွေလည်း ပြောတတ်လိုက်တာလေ…မောင် နှုတ်ဆိတ်နေရင်း လောကကြီးကို မကျေနပ်နေတာတွေ… ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ…အညိုနဲ့ တွေ့ ချိန် ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက်ပါပဲ…အညို့ အပေါ်ကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးရင်း အညို့ နားမှာ မိတ်ဆွေကောင်း တစ်ယောက် အဖြစ် မောင် အကောင်းဆုံးရပ်တည်ပေးပါ့မယ်…မောင့်နှလုံးသားကိုတော့ မောင် ပြန်သတိပေး ဆုံးမနေရတာပေါ့…
အညိုရေ… မင်းရဲ့ အပြုံးက မောင့်ကမ္ဘာပါ..မင်း မျက်နှာလေး ညိုမှာ မင်း အလိုမကျ ဖြစ်မှာတွေကို မောင် မလိုလားဘူး… လောကကြီးက မောင့်ကို ဒဏ်ခတ်တာ ရက်ရက်စက်စက်ပါပဲ အညိုရယ်… မောင်ခံရတာ ရူးမတတ်ပါပဲ… မောင့်ဘ၀က ခါးသီးမှု အလိုမကျမှု မကျေနပ်မှုတွေ ပြည့်နေတာ… အညိုမသိဘူး… မင်းဘာမှ မသိပါဘူး အညိုရယ်..မင်းလို ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို မောင် အနိုင်ကျင့်တာ မဟုတ်ရပါဘူး…မောင့်ရဲ့ နှလုံးသားက တစ်ခါဖူးမှ မဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့ အချစ်ဆိုတာကို အခုမှ ရက်ရက်စက်စက် ခံစားစေ ဆိုပြီးများ ပေးခဲ့သလား မသိပါဘူး…ဒါပေမဲ့ မောင် မငြင်းရက်ဘူး… မောင်ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ယူလိုက်မိတယ်…မောင့်ရဲ့ အချစ်က အညို့ တစ်ယောက်အတွက်ပါ… ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ မောင့်ဘ၀ကို မင်းကယ်တင်ပေးပါနော်… မောင် မတရားဘူးဆိုတာ မောင်သိပါတယ်… မောင့်ကို အတ္တကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်လို့ တော့ မစွပ်စွဲလိုက်ပါနဲ့ …. ခွင့်လွှတ်ပါလို့ ထပ်ခါဆိုရင်း သက်ပြင်းမောတွေ အခါခါ ရှိုက်ရင်း မောင့် ညတွေကို ကုန်လွန်ခဲ့တာတွေ အညိုရေ မင်း မသိပါဘူးကွယ်…
အညို မင်းဘယ်မှာလဲကွာ…မောင့်ရင်တွေ ပူလောင်လှပြီ … မောင် နှလုံးသားတွေ ရိုက်ချက်ပြင်းပြင်းနဲ့အရိုက်ခံထားရသလို အပူလှိုင်းကြီးပဲ ရင်တစ်ခုလုံး မွှေနှောက်နေသလိုပါပဲ… မောင့်ကို လှည့်ကြည့်ပါဦး… မင်း မောင့်အဖြစ်ကို မသိတာလား… မမြင်တာလား…ညနေကတည်းက အညို သူ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ လိုက်သွားတာ… အခုဘယ်အချိန် ရှိနေပြီလဲ…ကိုမောင်ကျော် လာပြောတဲ့ စကားတွေက သူ့ နှလုံးသား တစ်ခုလုံး ပြုတ်ကျသွားသလိုပါပဲ…“ ဆရာ…ဆရာဝန်မလေး…ယောကျာ်း တစ်ယောက်နဲ့ တည်းခိုခန်းထဲ ၀င်သွားတာ ကျွန်တော်တွေ့ လိုက်တယ်…”…မောင်ကျော်က မောင့် အခြေနေကို နားလည်တဲ့သူပါ… မောင့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကိုလဲ သူစာနာ နားလည်ပေးတယ်… အခုလည်း မောင့်ကို လာအသိပေးတာ…မောင်…ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး လေထဲမှာ လွင့်သွားချင်တယ်… ဖြစ်နိုင်ရင် အညိုရှိတဲ့ဆီ မောင် လိုက်လာချင်တယ်…ဒါပေမဲ့ အညိုနဲ့ မောင်က ဘာဆိုင်လို့ လဲ…ချစ်သူတွေလည်း မဟုတ်… အားးးးးးးး..မောင် စိတ်ရှိလက်ရှိ အော်ပစ်လိုက်ချင်တယ်…နာရီလက်တံရွေ့ နေတာကို ထိုင်ကြည့်ရင်း မောင့်မျက်ဝန်းတွေ စိုစွတ်လာတယ်…မောင့်ပါးပြင်တွေ ပူနွေးလာတယ်…အသက်ရှုတွေ မြန်လာတယ်…မောင် မင်းကို အဆုံးရှုံး မခံပါရစေနဲ့ …မောင် အညိုကို ဘယ်လောက် တွယ်တာ နေတယ်ဆိုတာ မောင့်ကိုယ့်ကို အသိဆုံးပါ…
မောင့်ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းက အညိုဖြစ်နေပြီလေ… ဆူးတွေပြည့်တဲ့လမ်းပေမဲ့ မင်းမနာကျင်အောင် မောင့် နှလုံးသားပေါ်တင်ပြီး ထမ်းခေါ်ပါ့မယ်… ကန္တာရလို ခြောက်သွေ့ နေပေမဲ့ မင်းအတွက် မောင့်နှလုံးသွေးတွေကို ဖောက်ထုတ်ပြီး အိုအေစစ်တစ်ခု ဖန်တီးပေးပါ့မယ် … မင်း ခြေလှမ်းတွေယိုင်နေရင်လည်း မောင့် သစ္စာနဲ့ခိုင်ခိုင်ထားပါ့မယ်…မင်း ပူလောင်တဲ့အခါ မောင့်မေတ္တာက အေးမြပေးပါ့မယ်…မောင့်ဆီကို ပြန်လာပါတော့…အညို…မင်းပြန်လာပါတော့ကွာ…မောင်ဖြစ်နေတာ တွေကို မင်း မြင်လှည့်ပါဦး… မင်းကို ဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့ မှ မောင် မခွဲဘူး..မောင့် အနားမှာပဲ မင်းကို မောင့်လိပ်ပြာ အဖြစ်ထားမယ်..မောင့်အတ္တတွေကို အကောင်အထည်ဖော်မယ်… မစဉ်းစားချင်ဘူး… မောင် ဘာကိုမှ ထည့်မတွက်တော့ဘူး..ဘယ်သူမှလဲ မောင့်ကို မတားကြပါနဲ့ … တားလို့ လဲ မရဘူး…မောင် ဒီလိုမျိုး တွေဝေနေရင် မောင့် အချစ်ကို မောင် သတ်နေသလို ဖြစ်နေလိမ့်မယ်…မောင့်ရဲ့ တစ်သက်မှာ တစ်ခါဖြစ်တဲ့ ဒီအချစ်ကိုတော့ ရှင်သန်ခွင့်ပေးပါနော်…မင်းကို မောင် သေမလောက် ချစ်တယ် အညိုရယ်…
(ကဲ မောင့်အကြောင်းသိချင်တဲ့သူတွေ မျှော်ရကြိုး နပ်ရအောင် အမြန်ကြိုးစားပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးက မပြီးသေးပါဘူး...ထုံးစံ အတိုင်း ဆက်ရန်ပါ...:P)
Posted by ကာရံဆူး at 10:53 AM 8 comments:
အခန်းထဲက မီးရောင်ပြာလဲ့လဲ့နဲ့ ခန်းဆီးစလေးတွေက လေတိုက်လို့ တလှုပ်လှုပ်... ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ချစ်ခဲ့တာလား ရူးခဲ့တာလား သီချင်းလေးက တိုးတိုးလေး ပျံ့ လွင့် နေတယ်…သီချင်းလေးကို ခံစားပြီး ကျွန်မအတွေး ဟိုဟိုဒီဒီ ပြေးလွှားလို့ ပေါ့…ဘ၀တွေမှာ တွေ့ဆုံကြုံကွဲ ဓမ္မတာ ဆိုတာကို ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မကောင်းကောင်း သိပါတယ်…… ဒါပေမဲ့ ကျွန်မလည်း လောကကြီးမှာ နားမလည်တာတွေများစွာနဲ့ ဘ၀ကို ရိုးရိုး ရှင်းရှင်းလေးပဲ ဖြတ်သန်းဖို့ ကျွန်မ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်…မထင်မှတ်တဲ့ နေရာတွေမှာ မထင်မှတ်ထားတာ မျှော်လင့်မထားတွေက အတားအဆီးမဲ့ ၀င်လာတတ်တာ ကျွန်မ သတိလက်လွတ် ဖြစ်သွားပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်ချိန် မရလိုက်မိတဲ့အထိပေါ့… ဒါကလည်း တစ်ခါဖူးမှ ရင်မခုန်ဖူးတဲ့ ကျွန်မ အချစ်ဆိုတာကို သိရှိခံစားလိုက်မိတဲ့ အချိန်မှာပါပဲ… ကံဇာတ်ဆရာရဲ့ ရိုက်ချက်ဆိုပြီး ကံကို ပုံမလား…ဒါမှမဟုတ် ၀ဋ်ကြွေးတစ်ခုလို့ခံစားနေရမလား…သီချင်းလေးအတိုင်းပါပဲ ကျွန်မ ရူးခဲ့တာလား..ဟုတ်မှာပါ..ကျွန်မ ရူးခဲ့တာပါလေ…
အချစ်ဆိုတဲ့ အရာက “မောင့်” ကိုစတွေ့ တုန်းကတော့ လှပခြင်းတွေ သယ်ဆောင်လာတဲ့ ပန်းခြင်းလေး တစ်ခုလို.. စိတ်ဝင်စားခြင်းများစွာပါတဲ့ လက်ဆောင်လှလှလေးတွေလို့ ကျွန်မ တွေးမိတယ်…ယုံလည်း ယုံကြည်မိတယ်… မောင့်ဆီက ကျွန်မလိုချင်တာတွေ အားလုံးလိုလို ရခဲ့တယ်…ငယ်ငယ်ကတည်းက သာမန်မိသားစုက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကျွန်မကို မိဘတွေက အထူးတလည် ဂရုစိုက်ဖို့ အချိန် မပေးအားပါဘူး… အရာရာ စရိတ်တွေ မြင့်မားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ စီးပွားရေးအတွက် မိဘတွေ ခေါင်းနစ်နေတာ ကျွန်မ နားလည်ခဲ့ပါတယ်… တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း ကျွန်မရဲ့ မသိစိတ်ကရော အသိစိတ်မှာပါ ဂရုစိုက်ခံချင်တဲ့…အလိုလိုက်ခံချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးက ကိန်းအောင်းနေတတ်တယ်.....
မမျှော်လင့်ပဲ ကျွန်မတာဝန်နဲ့ နယ်စပ်မြို့ လေးတစ်ခုကို တာဝန်ထမ်းဆောင် ဖို့ ရောက်ခဲ့တယ်… အရင်ကလည်း မိဘတွေနဲ့ မကြာခဏ ခွဲဖူးတော့ ကျွန်မအတွက် မိသားစုနဲ့ ခွဲနေဖို့ ကို သိပ်ပြီး ထွေထွေထူးထူး မခံစားရပါဘူး… မောင်နဲ့ စဆုံစည်းရာ…အချစ်ကို တွေ့ ရှိရာ နယ်မြေသစ်ကလေးပါ…ကျွန်မအတွက်ကတော့ အမှတ်ရစရာတွေ အများဆုံး ရှိတဲ့ အတိတ်မြို့ လေးပါ့….
မောင်ကတော့ အဲ့ဒီနေရာမှာ ကျွန်မထက် အရင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူပေါ့… နယ်မြေသစ်ဆိုတော့ ကျွန်မအတွက် အရာရာက စိမ်းနေသေးတယ်လေ… ဒါပေမဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှုနဲ့ ရက်အနည်းငယ်မှာပဲ ကျွန်မတော်တော်လေး အသားကျသွားပါတယ်…. လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထဲမှာ ကိုဟန်သစ်ထူးကတော့ ကျွန်မအတွက် တော်တော်လေးကို အပင်ပန်းခံရှာတယ်… အစစသူပဲ ကူညီပေးတယ်…အားလုံးထဲမှာ မောင်တစ်ယောက်သာ ကျွန်မကို မခေါ်မပြောပဲ သူစိမ်းလိုလို နေတတ်တာပါ… ကျွန်မကလည်း ရောက်ခါစလည်းဖြစ် ကိုယ်ကစပြီးခေါ်ရမှာကို အင်မတန် ၀န်လေးတတ်တော့ မောင့်ကိုလည်း စပြီး မခေါ်ခဲ့ပါဘူး… ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မက တစ်ခုခုဆို ကိုဟန်သစ်ထူးကိုပဲ အကူအညီတောင်းရတာပေါ့… ကိုဟန်သစ်ထူးက ကျွန်မအပေါ်မှာ တစ်မျိုး ဆက်ဆံတတ်ပေမဲ့ ကျွန်မမှာ တခြား ရင်းနှီးသူကလည်း မရှိ တခြားတာဝန်ကျ ဆရာမတစ်ယောက်ကလည်း မီးဖွားခွင့် ယူထားတော့ သူ့ ကိုပဲ အားကိုးနေရတယ်… သူနာပြုဆရာမလေးတွေက မြို့ ပေါ်ကဆိုတော့ သူတို့ က အဆောင်မှာ မနေကြဘူး..ကျွန်မကလည်း တစ်ယောက်တည်းပဲ နေချင်တော့ အဖော်ခေါ်မထားဘူး…သူတို့ ကတော့ မေးရှာပါတယ်…အစ်မဖြစ်ရဲ့ လားတဲ့..ကျွန်မက တစ်ယောက်ထဲ နေရတာကို သဘောကျတယ်လေ…အချစ်ကို မသိခင် အချိန်ထိပေါ့…
ဒီနေ့ ဂျူတီ Off မို့ ကျွန်မလည်း အိမ်ကို လွမ်းတာနဲ့စာလေးရေးပြီး စာသွားထည့် ဖို့ညကတည်းက ကိုဟန်သစ်ထူးကို ပြောထားတာ… မနက်ကျတော့ ရှိုးအပြည့်နဲ ကိုဟန်သစ်ထူးကို အခန့် သားတွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သူက “ မမေ..ကျွန်တော် အစ်မကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လည်း မိတ်ဆက်ပေးမလို့မြို့ထဲမှာ ချိန်းထားတယ်..အဲ့ဒါ စာထည့် ပြီးရင် ကျွန်တော်နဲ့ ခဏလိုက်ခဲ့ပါ”လို့ဇွတ်အတင်းခေါ်တော့တာပဲ… ကျွန်မလည်း သူစိမ်းယောကျာ်းတွေနဲ့ မတွေ့ ချင်တာရော ကိုဟန်သစ်ထူးကိုလည်း သိပ် ဘ၀င်ကမကျတာနဲ “ ဟင့်အင်း မလိုက်တော့ဘူး…မိတ်လည်း မဆက်ပေးပါနဲ့ ..စာထည့်ပြီး ပြန်ချင်တယ်..”လို့ ပြောတော့ “ ဟာ…ကျွန်တော်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းပြီးသားမို့ပြန်မလိုက်တော့ဘူး…ပြန်ချင် ကိုယ့်ဘာသာပြန်နှင့်..”တဲ့..ကဲ ကိုဟန်သစ်ထူးကတော့ ညစ်တွန်းတွန်းပြီ… ရှားရှားပါးပါးနားရက်ကလေးရတုန်း အိမ်ကို အလွမ်းတွေ အပြည့်နဲ့ ရေထားတဲ့ စာကလည်းထည့်ချင် စာတိုက်ကိုလည်း ရောက်ဖူးချင်နဲ့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေတုန်း…မောင်က ထုံးစံအတိုင်း ခပ်တည်တည် မျက်နှာနဲ့ ဘယ်အချိန်ထဲက ကျွန်မတို့ ပြောနေတာကို ကြားနေလဲ မသိဘူး..” စာထည့်မလို့လား…စာသွားထည့်မလို့ လိုက်ချင်လိုက်ခဲ့”…တဲ့..ပြောပုံက ဘယ်လောက် ဂွကျလိုက်ပါသလဲ…တုံးတိတိနဲ့ကဗျာ မဆန်လိုက်ပုံများ… ဒါတွေကပဲ မောင့်ကို သတိပြုချင်စရာ ကောင်းနေသလား မသိပါ….
ကျွန်မလည်း ကိုဟန်သစ်ထူးကို အားမနာနိုင်တော့ဘူး..မလိုက်တော့ဘူး မောင်နဲ့ ပဲ သွားမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်…ခဏနေတော့ မောင် အ၀တ်အစားလဲပြီး ထွက်လာတယ်…အ၀တ်အစားလဲတယ်သာ ပြောတာပါ…မောင့် ပုံစံက ဒီအတိုင်းပါပဲ… အ၀တ်အစားဆိုလို့ ကျွန်မ မြင်ဖူးတာ ၁၀စုံတောင် ပြည့်မယ် မထင်ပါ…မောင်က ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း မပြင်မဆင်နဲ့ …လောကကြီးကို ဘာတွေ မကျေမနပ် ဖြစ်နေမှန်း မသိတဲ့ မျက်နှာနဲ့ …ဘာမှ မပြောပဲ ရှေ့က ဦးဆောင်သွားတော့ ကျွန်မလည်း နောက်က ကုတ်ကုတ်လေးလိုက်သွားခဲ့တယ်…
ဘယ်အချိန်ကတည်းက မောင့်အပေါ်ကို အလိုလို ယုံကြည်မိရက်သား ဖြစ်သွားလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် မစမ်းစစ်ကြည့်မိဘူး… မောင်ခေါ်ရာနောက်ကို စိတ်ချလက်ချ လိုက်သွားခဲ့တယ်…မောင်က တစ်လမ်းလုံး စကားလည်း မပြောဘူး…မျက်နှာကလည်း ခပ်တည်တည်…ကျွန်မကလည်း စကားစမပြောချင်တော့ မြို့ ထဲကို သွားတဲ့လမ်းက မောင်နဲ့ ကျွန်မကြား နံရံတွေ ခြားနေသလိုပါပဲ… သြော်…မောင်ရယ် မောင်နဲ့ ကျွန်မ ကြားမှာ နံရံတွေက စကတည်းက ခြားထားတာ မောင့်ကို ချစ်စိတ်ကြောင့် မမြင်နိုင်ခဲ့တာလား မောင်ရယ်….
ဟိုရောက်တော့ ကျွန်မ စာထည့်နေတဲ့အချိန် မောင်က စာတိုက်ထဲ လှည့်ပတ်ကြည့်နေသေးတယ်... ကျွန်မလည်း မောင်စာထည့်မယ်ထင်ပြီး ရပ်စောင့်နေတော့ မောင်က “ပြီးပြီလား သွားမယ်”ဆိုတော့… ကျွန်မလည်း စာမထည့်ဘူးလား မေးချင်ပေမဲ့ မောင့်ကို နည်းနည်း ရှိန်တာနဲ့ ဒီအတိုင်း ပြန်လာကြတယ်…မောင်က စာမထည့်ပဲ ကျွန်မကို တကူးတက လိုက်ပို့ ရလောက်အောင်မှ မရင်းနှီးတာ…မောင် ဘာဖြစ်လို့ များ ကျွန်မကို လိုက်ပို့ တာလဲ…အိမ်အပြန်လမ်းမှာ လူနာဖြစ်ဖူးတဲ့ ဦးလေးမောင်ရဲ့ ကားနဲ့ တိုးတော့..ကျွန်မတို့ ကို လမ်းကြုံခေါ်လာပေးတယ်…ကားပေါ်မှာလည်း သူ့ အမျိုးသမီးပါတော့ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် နောက်ခန်းမှာ ထိုင်ကြတယ်… ကျွန်မ လဲပေါင်းများစွာတွေးနေရင်း မောင့်ကို ငဲ့ကြည့်တော့ မောင်က ငိုက်နေလေရဲ့ …ဟန်တောင် မဆောင်နိုင်ဘူး…အေးလေ..သူက နိုက်ဂျူတီကျထားတော့ အိပ်ချင်မှာပေါ့..ဒါနဲ့ များတောင် ကျွန်မကို လိုက်ပို့ နိုင်သေးတယ်…..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မ တိတ်တခိုးလေး ကျေနပ်နေမိပါတယ်….ကျွန်မ ပခုံးပေါ်ကို အိကျလာတဲ့ မောင့်ခေါင်းကိုလည်း တွန်းမဖယ်ရက်…မောင့်ကိုလည်း နှိုးဖို့ ခက်နဲ့ …ဦးလေးမောင်တို့ ဇနီးမောင်နှံကလဲ အလိုက်တသိ နှုတ်ဆိတ်နေလို့ သာပေါ့….ခဏနေ ကားဆောင့်တော့မှ မောင်က နိုးလာပြီး “ဆောရီး”..လို့တစ်ခွန်းဆိုတယ်…ဦးလေးမောင်ရဲ့ ဇနီးက “ ဆရာလေး ညက ပင်ပန်းသွားတယ်ထင်တယ်..”လို့ အပြုံးနှင့်ဆိုတယ်…ရှားရှားပါးပါး မောင့်မျက်နှာက ရှက်ကိုး ရှက်ကန်းလေး ဖြစ်လို့ နေတယ်...
အိမ်ရောက်တော ဦးလေးမောင်တို့ ကို ကျေးဇူးတင် စကားဆိုပြီး အလှည့် မောင့်ကို ကျေးဇူးတင် စကားတောင် မဆိုခင် မောင်က ဦးလေးမောင်တို့ ကို တစ်ချက်ပြုံးပြပြီး သူ့ အခန်းသူ ပြန်သွားနှင့်ပြီ… ဘယ်လို အမြင်ကတ်စရာ ကောင်းတဲ့လူပါလိမ့်လို့ တွေးရင်း ကျွန်မလည်း ကိုယ့်အခန်းကိုယ် ပြန်လိုက်တယ်…
အခန်းရောက်ကတည်းက လှဲလိုက်တာ ဘယ်လိုအိပ်ပျော်သွားမှန်း မသိလိုက်ဘူး…နိုးလာလို့ နာရီ ကြည့်လိုက်တော့ ည ၉နာရီပင်ထိုးနေပြီ….လူက နုံးချိချိ ဖြစ်နေတာနဲ့ရေကို စိမ် ပြီး ခေါင်းလောင်းချိုးလိုက်တယ်…၄၅မိနစ်လောက် ကြာသွားမယ်ထင်တယ်…ဗိုက်ကလည်း မဆာတာနဲ့ အခန်းထဲမှာပဲ ခွေနေလိုက်တယ်…ည ၁၂နာရီလောက်ကျတော့မှ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်နေအောင် ချမ်းပြီး အဖျားတွေ တက်လာတယ်….ကျွန်မက နဂိုကတည်းက အအေးကြိုက်သူဆိုတော့ အနွေးထည်ရယ်လို့ အိမ်ကနေ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ယူမလာမိဘူး…လူးလိမ့်နေအောင် အချမ်းတက်လာတာ…မောင့်ကိုလည်း သွားပြောရမှာ မ၀ံ့မရဲ… ယုံကြည်ရလောက်ပါတယ်လို့ ကိုယ့်ကို အားတင်းပြီးနေပေမဲ့…မိဝေးဖဝေးမှာ တစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ အားငယ်စိတ်တွေကလည်း ရင်ထဲ တလိမ့်လိမ့်ပေါ့…ကြိုးစား အားတင်းပေမဲ့ဘယ်လိုမှ နေလို့ မရတော့တာနဲ့ …မောင့်အခန်းကို သွားခေါက်တော့ မောင်က မအိပ်သေးလို့ တော်ပါသေးရဲ့ …မောင်က ကျွန်မ မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး “ ဘာဖြစ်တာလဲ…ဘာဖြစ်လို့ လဲ..”…“ ညနေကတည်းက ပြန်လာပြီး ရေချိုးလိုက်တာ အပူရှပ်ပြီး ဖျားတာထင်တယ်…ချမ်းလိုက်တာလည်း အရမ်းပဲ..” တုန်တုန်ရီရီနဲ့ ကျွန်မဆိုတော့ မောင်က ချက်ချင်း အခန်းထဲ ၀င်သွားပြီး သူဟိုတစ်နေ့ ကမှ လက်ဆောင်ရထားတဲ့..အနွေးထည် အသစ်ကြီးကို ထုတ်ပေးတယ်…ကျွန်မက ဆရာဝန်ပေမဲ့ ဆေးသောက်ရမှာ အင်မတန်ပျင်းသူပါ.. ဖြစ်လာရင် ဒီအတိုင်းပဲ ပေနေလိုက်တာများတယ်… ဘာဆေးမှလည်း ဆောင်မထားတတ်ဘူး… “ဆေးမသောက်ရသေးဘူးလား…” “ဟင့်အင်း..”…မောင်က ဘယ်လို ဆရာဝန်ပါလိမ့် မျက်နှာပေးနဲ့ … သောက်ရမဲ့ဆေးတွေ ပေးတယ်…“အဲ့ဒီဆေးတွေ အခန်းမှာ ရှိတယ်” ညာပြောပြီး ကျွန်မက ဆေးမသောက်ချင်တဲ့ ကလေးလိုလုပ်တော့ “ယူသွား…သောက်လိုက်..ပြီးရင် အခန်း တံခါးကို Lock မချထားနဲ့ …”တစ်ခုခုဆို လှမ်းအော်လိုက်တဲ့…သူ့ ကို ယုံလား မယုံလားလဲ တစ်ခွန်းမမေးပဲ သူ ပြောချင်ရာပြောရင်း ကျွန်မကို အခန်း ပြန်လိုက်ပို့ ပေးတယ်…မောင်က ပြန်ခါနီး ကျွန်မကို တစ်ချက်ကြည့်သေးတယ်…မောင့်မျက်ဝန်းမှာ စိုးရိမ်စိတ်ကလေး ရေးရေးလေး ကျွန်မ နေမကောင်းတဲ့ ကြားက တွေ့ လိုက်သလိုပဲ…
မနက်မိုးလင်းတော့ ဘယ်အချိန်ကတည်းက မောင် နိုးနေလဲ မသိဘူး.. ကျွန်မအတွက် ကော်ဖီနဲ့ မုန့်တောင် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီ… သူဂျူတီသွားခါနီး လုပ်ပေးထားတာနေမှာ… ကျွန်မလည်း သက်သာသွားပေမဲ့… ဂျူတီဝင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးလို့့ခွင့်ယူထားလိုက်တယ်…. နေ့ ခင်းကျတော့ ကျွန်မ နည်းနည်း ထူထူထောင်ထောင် ဖြစ်လာလို့အလုပ်တစ်ခုပြီးအောင် အ၀တ်လျှော်မယ် စိတ်ကူးတုန်း…ဖုန်းဝင်လာတယ်… ကျွန်မလည်း ဘယ်သူဆီကပါလိမ့်လို့ ကိုင်လိုက်တော့ “ဆေးသောက်ပြီးပြီလားတဲ့..”.. ဒါမောင့်အသံ… ဖုန်းထဲမှာ တစ်ခါမှ မကြားဖူးပေမဲ့….မောင်ပဲဆိုတာ သေချာနေတယ်…“ဟုတ် သောက်ပြီးပြီ…ထမင်းစားပြီးပြီလား..” “အင်း အခုပဲ စားမလို့ စိတ်ပူလို့ ဆက်လိုက်တာ ဘာလုပ်နေလဲ..”…“ ဟို အ၀တ်လျှော်မလို့ …”…“ ဟာ…နေမကောင်းတဲ့ဟာကို…မလျှော်နဲ့ ထားလိုက်..လုံးဝ မလျှော်နဲ့ နော်…”…“ အင်း..ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့..”…“သက်သာအောင် နေနော်…ဒါပဲနော်”… မောင့်အသံတွေ တုန်နေတာလား...မောင့် အသံက တိုးတိုးလေးရယ် ...သြော်..မောင်က ဒီလိုဆိုတော့လည်း စိတ်ရင်းကောင်းသားပဲ..စိတ်ပူတတ်သားပဲ. . ဘာရယ်မဟုတ် တစ်ယောက်ထဲ ကြိတ်ပြုံးနေလိုက်တယ်…
ညနေရောက်တော့ မသိစိတ်က နှိုးဆော်လို့ လား မသိ…မောင်ပေးတဲ့ အနွေးထည်လေး ၀တ်ပြီး အဆောင်ရှေ့မသိမသာ ရပ်ရင်း တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မျှော်နေမိတယ်…အဲ့ဒီတစ်ယောက်က ဘယ်သူ ဖြစ်မယ်ထင်လည်း မောင်ပဲပေါ့…ဒါပေမဲ့ လမ်းကလေးကို မျှော်ရင်းကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်မ အရင်ဆုံး မြင်လိုက်ရတာက ကိုဟန်သစ်ထူး..သူက ဟိုတစ်ခေါက်ကတည်းက ကျွန်မကို မကျေနပ်ဘူး ထင်ပါတယ်…စကားမပြောပဲနေတာ ကြာပြီ… ကျွန်မကလည်း အရင်က ဘယ်လိုပဲ ကူညီခဲ့ ကူညီခဲ့ သူကူညီခဲ့လို့ကျွန်မ အဆင်ပြေခဲ့တာမို့နှုတ်ဆက်ပြုံးလေးပြုံးပြတာတောင် သူက မသိသလို ဟန်ဆောင် သွားတယ်…
စိတ်ထဲမှာ ဘာမှ မရှိတာမို့မောင့်ကိုပဲ ဆက်မျှော်နေလိုက်မိတယ်…ဟော…တွေ့ ပါပြီ…ဟို ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ.. မောင်က ဆေးလိပ်သောက်ရင်း…လျှောက်လာတယ်…ကျွန်မကိုလည်း မြင်ရော ဆေးလိပ်ကို ကမန်းကတန်း လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်…ကျွန်မ မသိဟန်ဆောင်ပြီး အခန်းထဲမှာ ပြန်နေလိုက်တယ်…ထင်တဲ့အတိုင်း တံခါးလာခေါက်တယ်…ရင်ထဲမှာ လှိုက်ကနဲ ခုန်ပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ..မောင်မဟုတ်ဘူး…မောင့်တပည့် ကိုမောင်ကျော်..“ ဆရာမလေး နေမကောင်းဘူးဆိုလို့ဝယ်လာတာ…ပူတုန်းသောက်လိုက်နော်…” “ အော်..ဟုတ်ကဲ့…ကျေးဇူးပဲနော်..” ကိုမောင်ကျော်က ဘာမှ ပြန်မပြောဘူး…ပြုံးပြီးထွက်သွားတယ်…ကျွန်မလည်း ဗိုက်ဆာတာရော ဘာကို မကျေနပ်မှန်းမသိ မကျေနပ်တာရော ပေါင်းပြီ…ယိုးဒယားစတိုင် ညှပ်ခေါက်ဆွဲပြုတ် ပူပူလေးကို ငုံ့သောက်လိုက်တယ်…စိတ်ထဲမှာတော့ မတင်မကျနဲ့ ပေါ့…
ကျွန်မနေပြန်ကောင်းလာလို့ ဂျူတီ ပြန်ဝင်နိုင်တော့လည်း မောင်နဲ့ ဆက်ဆံရေးက အရင်အတိုင်းပါပဲ… ဒါပေမဲ့ မောင့်ဆီက တစ်ချက်တစ်ချက် ခိုးကြည့်တာလေးတွေကိုတော့ ရှိလာတတ်တာပေါ့.. ကျွန်မကလည်း စကားနည်းသူဆိုတော့ မေးထူးခေါ်ပြောလောက်သာ မောင်နဲ့ နှုတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်…. တစတစ အချိန်ကြာလာတော့လည်း မောင်နဲ့ ကျွန်မကြားမှာ နားလည်မှုအလိုလို ရှိလာသလို မောင်ပေးတဲ့ အမိန့် တွေကို အလိုလို နာခံတတ်လာတယ်…..ဥပမာ ကျွန်မဆေးကုပေးတဲ့ သူဌေးမကြီးရဲ့ သားက ကျွန်မဆီ လက်ဆောင်တွေ လာပို့ တာတို့ ...ကျွန်မဆီကို မုန့် င်္တေ လာပေးတာတို့ပြီးတော့ လူနာလိုက်ကြည့်ရင်း လမ်းက ဘုရားကို ၀င်ပို့ ပေးတာတို့ မောင်က နည်းနည်းမှ မကြိုက်ဘူးတဲ့လေ...အဲ့လိုနေ့ မျိုးဆိုရင် မောင်က မျက်နှာကြီးပုပ်သိုးနေတာ ရယ်ချင်စရာကြီး..မောင်က ကျွန်မ မမြင်အောင် ဟန်ဆောင်နေပမဲ့ မောင့်ကို အရိပ်လို ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်မကတော့ သိတာပေါ့..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ..အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းက အထိတော့ မောင်က ကျွန်မအတွက် မိတ်ဆွေကောင်း တစ်ယာက်ပါပဲ......
နောက်ပိုင်း သူနာပြုဆရာမလေးတွေဆီက တဆင့် သိရတာက မောင်က ဘယ်သူ့ ကိုမှ ဟက်ဟက်ပက်ပက် စကားမပြောတတ်ဘူး…ပြောရင်လည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောတတ်တယ်.. ပြီးတော့ မောင်က ဟင်းချက်ကောင်းတယ်တဲ့…အိုး မထင်ရဘူးနော်..ဒီလိုပုံစံက…ကျွန်မ ကြားဖူးတာ ဟင်းချက်တယ်ဆိုတာ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ ပတ်သက်နေတယ်လို့ ကြားဖူးတာ…ပြီးတော့ စိတ်လည်း ရှည်ရတယ်တဲ့…မောင့်လို ပုံစံက ဟုတ်ပါ့မလားလို့ တောင် ထင်စရာ….အခွင့်လေးများ ရရင် မောင် ချက်တာလေးကို မြည်းချင်စိတ်ကတော့ တဖွားဖွားပေါ့…မောင်က ဆရာဝန်ပေမဲ့ ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်ကိုလဲ တစ်ခါတစ်ခါ သောက်တတ်သေးတယ်တဲ့… ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူကမှ မောင့် အကြောင်းကို ဂဃနဏ မသိကြဘူး… မောင်စိတ်ရင်းကောင်းတယ်လို့ တော့ အားလုံးက လက်ခံကြတယ်…မောင့်ရဲ့ အားနည်းချက်က အရမ်းကို အားနာတတ်တာပါပဲ…. ပြီးတော့ မောင့်မှာ မိသားစု ရှိတယ် မထင်ရလောက်အောင် မောင်က ဘယ်ကိုမှ ဆက်သွယ်တာ ဘယ်သူ့ ဆီကမှ ဆက်သွယ်တာ မကြားဖူးကြဘူးတဲ့လေ….အော် မောင်က တော်တော် လျှို့ ဝှက်နိုင်တာပဲနော်… ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်မ အချစ်တွေ မောင့်ဆီ ကျွံခဲ့တာပေါ့…….မောင်ရယ် ရက်စက်လိုက်တာ…..ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ မောင့်ကို မမုန်းပါဘူး…မုန်းဖို့ ခွန်အား ဘယ်သူက မျှမျှ ကျွန်မ လက်မခံခဲ့ပါဘူး…အဲ့ဒီလောက်ထိ စူးစူးစိုက်စိုက် မောင့် အပေါ် သက်ဝင် ချစ်ခင်တာပါမောင်ရယ်……..
Posted by ကာရံဆူး at 4:23 PM7comments:
အလေ့ရိုးရိုး နေ့ မျိုးများစွာ
ဘ၀ခါးခါး ညများစွာနဲ့ 
ဘ၀ပင်လယ် အ၀ကျယ်မို့ 
ဟော အတိနဲ့တိမ်စိုင်တိမ်ခဲ
ငိုကာချဖို့သူအားကူလို့ ….
ရှေ့ သို့ မျှော်ရည်
Posted by ကာရံဆူး at 2:58 PM5comments:
ရှင်သန်ရာ ကမ္ဘာမြေကြီး အတူတူ
ပက်ကြားအက်ပြီး အဆီအနှစ် မရှိတဲ့ မင်းရင်မှာ…
ငါရဲ့ ရစ်နှစ်သည်းချာ ပျိုးပင်လေးတွေကို
တယုတယ ပေါင်းတင် ရေလောင်းလို့ ရော..
လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်ခွင့် ရှိမှာတဲ့လား..
အနှောင်အဖွဲ့ ကင်းတဲ့ ကောင်းကင်ပေါ်မှာ
မင်းရဲ့ ချုပ်နှောင်မှုနဲ့တောင်ပံ ရိုက်ချိုးခံထားရတဲ့
ငါ့ ငှက်ကလေးတွေခမျာ အဆုံးအစမဲ့
ပင်လယ် ၊ သမုဒ္ဒရာတွေရှိရက်နဲ့ 
ကမ်းစပ်ကို အနားသပ်နေတဲ့ မင်းရဲ့ 
ငါ့ရဲ့ကြည်လင်အေးမြတဲ့ စမ်းချောင်းကလေးတွေ
လွပ်လပ်စွာ တသွင်သွင် စီးဆင်းနိုင်ပါ့မလား…
ကြည့်မ၀တဲ့ သဘာဝတရားရဲ့ 
ငါတို့ ရဲ့ပကတိဖြူစင်မှုတွေနဲ့ အတူ
အာရုံစက္ခုတွေ အလင်းမှောက်လို့ 
အမြင်တွေ ကမောက်ကမနဲ့ 
ဘယ်ဘ၀ ဘယ်ဘုံတောင် ရောက်နေရပါလိမ့်…………
အဖေ မြန်မြန်ကျန်းမာပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါသည်....
“ အဖေကလဲ…ဒီအရက်တွေ မသောက်ပါနဲ့ ဆိုတာ…”..ကျွန်မရဲ့ အဖေ့ကို မကျေမနပ် ပြောလိုက်တဲ့လေသံ … “အဖေ့ ဆေးလိပ်နံ့ တွေကလဲ အသက်ရှုလို့ တောင် မ၀တော့ဘူး..”.. ကျွန်မရဲ့ပြစ်တင်သံ..
ဟုတ်ပါသည်…တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဒီအကြောင်းကြောင့် အဖေနဲ့့ကျွန်မ အချေအတင် အမြဲ ဖြစ်နေကျပါ… ပြန်စဉ်းစားရင် အဖေ့ကိုလဲ သနားမိတယ်…ဒါပေမဲ့ ဒီလိုတွေ ပြောတယ်ဆိုတာကလဲ အဖေ့ ကျန်းမာရေး အတွက်ပါ…တစ်နေ့ ကို စီးကရက် တစ်ဗူးသောက်တဲ့ အဖေ….ချောင်းတွေ မကြာခဏဆိုးနေတဲ့ အဖေ့ကို ဆေးစစ်ကြည့်ပါလို့ ပြောတိုင်း အဖေက “ အိုး…အဖေ့ ကျန်းမာရေးက ဒေါင်ဒေါင်မြည်ပဲ..” တဲ့… ပြောရခက်တဲ့ အဖေပဲ…အဖေ့အကြောင်းတွေးရင်း ခေါင်းထဲမှာ ငယ်ငယ်က ဘ၀ကို ပြန်သတိယ သွားမိတယ်..
အရင်တုန်းက ကျွန်မတို့ ငယ်ဘ၀က လိုတရပါ… အဖေ့ရဲ့လုပ်ငန်းကလဲ ၀င်ငွေကောင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့… လုပ်ငန်းခွင်မှာ အပေါင်းအသင်းနဲ့ သောက်မယ်…အလုပ်အကြောင်းပြောရင်းစားကြ သောက်ကြပေါ့… အဖေက ငွေကလေး လက်ဖျားသီးနေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ မင်းသားတစ်ယောက်လိုပါပဲ…ဆေးလိပ်နဲ့အရက်ကို လုပ်ငန်းခွင်မှာရော အိမ်မှာပါ ဟန်ပါပါ မာန်ပါပါ ပျော်လို့ပင်ပန်းလို့ သောက်ခဲ့သူပါ…ကျွန်မတို့မောင်နှမ လူပျို အပျိုပေါက် အရွယ်ကျမှ ကံကြမ္မာရဲ့ အလှည့် အပြောင်းနဲ့ ရန်သူမျိုး ငါးပါးဒဏ်ကြောင့် ကျွန်မတို့ မိသားစုလေး ကမောက်ကမ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်…အဖေလည်း အလုပ်မလုပ် တော့ဘူး…ကျွန်မတို့လဲလုပ်ငန်းခွင် ကိုယ်စီဝင်ပေါ့…ဒါကိုလဲ အဖေက အသောက်မပျက်…ပြောတာက စိတ်ညစ်လို့တဲ့…ညညဆို အဖေ့ သက်ပြင်းသံကို ကျွန်မ ကြားကြားနေရတယ်…သားသမီးတွေ ရှာနေရတာကို သူ စိတ်မချမ်းသာဘူးလေ… အဖေ့ရဲ့ သားသမီး အပေါ်မှာ ထားတဲ့ စေတနာတွေပါ…
တစ်နေ့ ကျွန်မ အလုပ်က ပြန်အလာ..အဖေ့ကို ဒီလို သောက်စားနေတာ တွေ့ ရတော့ စိတ်မချမ်းသာဘူး… ဒါနဲ့ ကျွန်မလဲ မနေနိုင်တော့ဘူး…အဖေ့ကို “ အဖေကလဲ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဒါတွေပဲ လုပ်နေတာပဲ…”လို့ အဖေ့ကို ထုံးစံအတိုင်း စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ကျွန်မ ပြောမိတော့ အဖေက “ သမီးလေးရယ်…အဖေက ဘယ်သူ့ ကို ဒုက္ခပေးနေလို့ လဲ…အဖေကိုယ့်ဟာကို အေးအေးဆေးဆေး သောက်နေတာပါ..”တဲ့… ဟုတ်တော့ ဟုတ်သည်…အဖေက သောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ဒုက္ခမပေး ပြဿနာမရှာပါဘူး… သူ့ ဟာသူ အေးအေးဆေးဆေးလေး နေတတ်သူပါ..ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ က ရပ်ကွက်ထဲမှာ နေတာဆိုတော့ သိက္ခာကျတယ် ထင်ခဲ့မိတယ်လေ…ပြီးတော့ အဖေ့အတွက်လဲ စဉ်းစားပြီးပြောတာပါ…..ဒါပေမဲ့ အဖေ့ကို ဒီလို ပြောပြီး ကျွန်မ မျက်နှာ ပုပ်သိုးနေတယ်…ဘာလုပ်လုပ် ဒုန်းဒုန်း ဒိုင်းဒိုင်း နဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေ ဖြစ်နေတယ်…(ငရဲအိုးတော့ ဇောက်ထိုးကပ်တော့မယ်…) ဒါကို သိတဲ့ အဖေက တော်တော်လေး စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားပုံရတယ်…ပြီးတော့ အဖေက “သမီးလေးတို့ ကို အဖေ ဒုက္ခ မပေးပါဘူးကွယ်…အဖေ ကိုယ့်ဟာကို အေးအေးဆေးဆေး နေနေတာပါ..ဒါကို သမီးက ဘာမကျေမနပ် ဖြစ်နေတာလဲ..” လို့ အဖေမေးတော့ ကျွန်မလဲ “ အဖေ့ကို ဒီလိုမျိုး ပုံစံကြီးတွေ့ ရတာ စိတ်မချမ်းသာဘူး…ပြီးတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာလဲ မျက်နှာငယ် ရတယ်…” လို့ကျွန်မပြောတော့… အဖေ့မျက်နှာမှာ ကျွန်မ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးခဲ့တဲ့ မျက်ရည်တွေ လိမ့်ဆင်းလာတယ်…
“ သမီးရယ်…အဖေက ဒီအချိန်မှာ စီးပွားမရှာနိုင်တော့လို့ သမီးလေးတို့ လုပ်စာကို စားနေရလို့ ဒီလိုမျိုး ပြောတာပေါ့နော်…” တဲ့… “ သမီးလေးတို့ ကို ရွှေတွဲလွဲ ငွေတွဲလွဲ ထားခဲ့တုန်းကလဲ အဖေ ဒီလိုမျိုး နေခဲ့တာပါ…”တဲ့..ကဲ…ကျွန်မ ဘယ်လို စကားတွေနဲ့ အဖေ့ကို ပြောရမလဲ…ကျွန်မမှာ စကားတွေ ဆွံ့ အ နေခဲ့တယ်…ကျွန်မလဲ အဖေနဲ့ တူတူ ရောပြီး ငိုလိုက်မိတယ်…ပြီးတော့မှ “ အဖေရယ်…သမီး ဒီသဘောနဲ့ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး…အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အလေးထားတဲ့ သမီးတစ်ယောက် အနေနဲ့ရင်ထဲက ရှိတဲ့ ကရုဏာ ဒေါသော ပြောမိတာပါ အဖေရယ်….သမီး ကြောင့် အဖေ အခုလို ခံစားရတယ်ဆို သမီး ကန်တော့ပြီး တောင်းပန်ပါတယ်…”..ကျွန်မ ပြောလဲ ပြော ငိုလည်းငိုပေါ့…အဖေက အဲ့ဒီတော့မှ သူ့ထုံးစံအတိုင်း လေပြည်အေး လေးနဲ့ .. “ သမီးရယ်…အဖေက သမီးလေးတို့ ရှာကျွေးနေရလို့ အဖေက သမီးလေးတို့ ကို ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင် တော့လို့ …သမီးလေးတို့ ရဲ့ လုပ်စာ ထိုင်စားနေရပေမဲ့ အဖေတစ်ရက်မှ စိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါဘူး…အဖေ့ကို သမီးလေးက ဒီလိုပြောတော့ အဖေ အရမ်းဝမ်းနည်းသွားလို့ ပါ…”…တဲ့…အဲ့ဒီနေ့ က ကျွန်မတို့ သားအဖလည်း မိုးလင်းတဲ့ထိ စကားတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ်….
နောက်ကျွန်မလဲ အဖေ စိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုပြီး ဘာမှ မပြောတော့ဘူး…အဖေလည်း သူစိတ်ညစ်လာတဲ့ အခါတိုင်း ကျွန်မတို့ အလုပ်က ပင်ပင်ပန်းပန်း ပြန်လာတိုင်း သူလဲ ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်ကို အဖော်ပြုရင်း စိတ်မချမ်းမသာနဲ့ဒီအတိုင်း နေလာခဲ့တယ်….အမေကတော့ မယားဝတ္တရားရော မိဘသတ္တရားရော ကျေပြွန်ရှာပါတယ်….
အခြေနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် ကျွန်မ မိဘတွေနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရောက်ခဲ့တယ်… အမြဲတမ်းလည်း မိဘတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကိုယ်စွမ်းသလောက် အဝေးကနေပဲ သတင်းမေးခဲ့တယ်… တစ်နေ့ တော့ အမေက “ ဒီနေ့နင့်အဖေ လူမိုက်ကြီးကို ဆေးရုံသွားပြရတယ်..”တဲ့…ကျွန်မ စိတ်အရမ်းပူသွားတယ်…ကမန်းကတန်းပဲ မေးလိုက်တယ်… “ အဖေ ဘာဖြစ်လို့ လဲ အမေ..” လို့ .. “ ဘာဖြစ်ရမလဲ နင့်အဖေ သူ မိုက်ခဲ့တာတွေကြောင့် အခုတီဘီတဲ့…” ကျွန်မ ချာချာလည်သွားတယ်… “ ဟင်…ဒါ..ဒါဆို ကင်ဆာပေါ့..ကင်ဆာဖြစ်ပြီပေါ့…” မရဲတရဲ အမေ့ကို မေးကြည့်တော့.. “ ကင်ဆာအဆင့်ထိတော့ မရောက်သေးဘူး..ဒါပေမဲ့ ဆေးကိုတော့ နှစ်နဲ့ချီသောက်ရမယ်တဲ့…လူမိုက်ကြီးကို ပြောလိုက်ဦး”..ဆိုပြီး အဖေ့ကို စကားပြောခိုင်းတယ်..ကျွန်မလဲ ကင်ဆာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ စိတ်တော့ နည်းနည်းအေးသွားတယ်...ကျွန်မ အဖွား အဖေ့ရဲ့ အမေလဲ ဆေးလိပ် တအားသောက်လို့အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ ဆုံးသွားတာလေ...
VZO ထဲမှာ မြင်ရတဲ့ အဖေ့မျက်နှာက ပိန်သွားလိုက်တာ…သြော်…အဖေရယ် ဒါတွေကို ကြိုသိလို့သမီးပြောခဲ့တာပါ အဖေရယ်… “ အဖေဘယ်လိုနေသေးလဲ…ချောင်းဆိုးရင် သွေးပါတာ များလား..သက်သာလား..” အလောတကြီးပဲ မေးလိုက်တယ်.. အဖေက အပြစ်ရှိသူ တစ်ယောက်လို ငြိမ်သက်နေတယ်…“ အဖေ…ပိုက်ဆံတွေ ဘာတွေ ချွေတာ မနေနဲ့ နော်…အထူးကုနဲ့ သွားပြလိုက်…အဖေလိုတာ သမီး အကုန်ပို့ ပေးမယ်…” ဆိုတော့… “ ဟာ…ရတယ် သမီး အဖေက ဘာမှ ဖြစ်တာမှ မဟုတ်တာ…အဖေ သမီးတို့ ဆီကို ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ လာဦးမှာ..” တဲ့…ပြောရင်း အဖေချောင်းတွေဆိုးနေပြန်တယ်…အဖေက သားသမီးတွေ ရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံကို သုံးရမှာ အင်မတန် ၀န်လေးတတ်သူပါ… ဒါကြောင့်လဲ လိုအပ်တာကို မသုံးမိမှာ စိုးလို့ကျွန်မပြောခဲ့တာပါ…အဖေ့ အကြောင်းကို ကျွန်မ အသိဆုံးလေ…
အဲ့ဒီလိုတွေ မတိုင်ခင်က အဖေတို့ ကို အလည်လာဖို့ကျွန်မ ပြောထားတာပါ… အဖေကလဲ လာခဲ့မယ်ဆိုပြီး အားတက်သရော ပြောခဲ့သေးတာ…အခုတော့…အဖေ့မှာ ဒီရောဂါဆိုးကြီး ခံစားနေရတယ်… အဖေ့ကို ကျွန်မ လေအေးလေးနဲ့“ အဖေရယ် အခုတော့ ဒါတွေကို မလုပ်ပါနဲ့တော့နော်…အရင်ကဆို အဖေ အသည်းလည်း ခြောက်ခဲ့ပြီးပြီ….အခုတစ်ခါ နောက်တစ်မျိုး…အဖေ့ အတွက် ဒီဟာတွေက ဘယ်လောက် ကောင်းကျိုးပေးလဲ…သမီးတို့ အခုဆို အဖေ့ကို အဝေးကနေပဲ ဂရုစိုက်နိုင်တာပါ…အဖေ့ကို အနီးကပ် သမီး မပြုစုနိုင်ဘူး…အဖေလိုတာကို အဝေး ကနေပဲ သမီး ပို့ ပေးနိုင်ရုံ..သတင်းမေးရုံကလွဲရင် စိတ်သွားတိုင်း လုပ်လို့ မရတဲ့ အခြေနေပါ အဖေ…အဲ့ဒီတော့ အဖေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ပေးပါ…သမီးတို့ မိသားစုတွေ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း နဲ့အကြာကြီး နေကျဦးမှာလေ… အဖေကျန်းမာမှ သမီးတို့ ဆီလဲ လာလို့ရမှာလေ….”… ကျွန်မပြောတာတွေကို အဖေ ဘာမှ ပြန်ပြောပဲ နားထောင်နေပေမဲ့ အဖေ့ရဲ့မျက်ဝန်းမှာ လဲ့နေတဲ့ အရည်တွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အဖေ့ သမီးကောင်းကောင်း နားလည်ပါတယ်…
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကစပြီး ခုချိန်ထိ အဖေ အရင်လို မနေတော့ဘူး… အရင်ကထက်လည်း ကျန်းမာရေး ပိုကောင်းလာတယ်… နှစ်နဲ့ ချီပြီး သောက်ရမဲ့ဆေးက အခုဆို လပိုင်းပဲ သောက်ရတော့မယ်တဲ့…အဖေ့ရဲ့ သွေးရင်းသားရင်းတွေတောင် ရောဂါကူးမှာစိုးလို့အိမ်တောင်မလာကြပေမဲ့ အမေကတော့ မေတ္တာအရင်းခံ နဲ့ စေတနာထားပြီး ဘာကိုမှ မကြောက်… အဖေ့ကို ပြုစုဂရုစိုက် ပေးခဲ့တာကြောင့်လဲပါမှာပါ…အဖေသာ အရင်က မဆိုးခဲ့ရင် ကျွန်မတို့အခုချိန်လောက်ဆို မိသားစုတွေ ဆုံနေလောက်ပြီ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ… အဖေ အခုလို ကျန်းမာလာတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်မဆုံးပါဘူး… အဖေ့ကို ချစ်တဲ့ သမီး…. မိသားစု ဆုံတွေ့ရမဲ့ ရက်ကို စောင့်စားရင်း… အဖေ အမြန်ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့ သလိုက်ပါတယ်…အဖေ…
Posted by ကာရံဆူး at 2:30 PM6comments:
တုန်ခါ ဖျစ်ညှစ်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေနောက်မှာ
နှုန်း အမြန်နဲ့ ရုန်းကန်ရတာတွေ
အသုံးမတန်ပဲ ပြောတဲ့ အဆူအဆဲကြားက
မပြုံးတပြုံးနဲ့မတုံးချင်ပဲ တုံးနေရတဲ့ဘ၀…
ချွေးစက်တွေ မြေကျမှ အနေလှမယ်ဆိုပါလား…
ဒီ အိမ်ရဲ့ အမိုးအောက်က မိသားစုတွေ
ချွေးတွေ ပေါက်ပေါက်ကျအောင် ရုန်းကန်လို့ နေရင်းပါ…
အနေရ ကျဉ်းပေမဲ့ မိဘတွေပေးတဲ့ မေတ္တာအလင်းကြောင့်..
လင်းတစ်ခါ မှောင်တစ်လှည့်နဲ့ 
အလှည့်ကျရက်တွေကလဲ ချစားလို့ 
လ က နှစ်တွေပြောင်းခဲ့ပြီ…
ဖြတ်ပျံ သွားတဲ့ လေယာဉ်ပျံနောက်…
မိသားစု ပုံရိပ်တွေ ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်ပါသွားတာတောင်…
ယောင်လို့ သက်ပြင်းတောင် မချနိုင်သေးဘူးလေ…
Posted by ကာရံဆူး at 2:26 PM4comments:
နင် နင်းရာ ခြေလှမ်းတိုင်းမှာ
ငါ့ရင်က သောက မီးတောက်တွေကို
တစ်နေ့ တစ်ရက်နဲ့ 
အမေ့ခက်တဲ့ နေ့ ရက်တွေကို ကျော်လွန်လို့ 
အဖော်မွန် နင် တစ်ယောက်
ငါ့ရဲ့ စောကျောတဲ့ ဇောတွေကြောင့်
နင် အမောတွေ မပျောက်ခဲ့ရင်
ငါဟာ နင့်ဘ၀မှာ မွှေနှောက်တဲ့ မုန်တိုင်းသဖွယ်
နင့် နှုတ်ဖျားကမှ ဟုတ်ရဲ့ လားလို့ 
ငါ သံသယ ရှိရပေမဲ့
ဒီရင်မှာ ထိရှလွန်းလို့ 
Posted by ကာရံဆူး at 10:03 PM5comments:
Posted by ကာရံဆူး at 2:32 PM 11 comments:
စိတ်ကူးနဲ့ လက်တွေ့ ရဲ့ ကွာခြားချက်က
သုံး နဲ့ လေးလို
ကျောချင်းကပ် နေပေမဲ့ နီးစပ်ဖို့ က မဖြစ်နိုင်..
စိတ်ကူးကို သေချာ အပိုင်တွက်လို့ 
နေ့ နဲ့ ည ခြားနားချက်ကြားက..
အသက်မဲ့ ၀ိဥာဉ်နဲ့အသားကျနေတဲ့
ဗိုက်ထဲက တကြုတ်ကြုတ် အသံတွေနဲ့ အတူ…
အသပြာနောက် ကောက်ကောက်လိုက်လို့ 
စိတ်ကူး အိပ်မက်ကို လက်တွေ့ မှာ
Posted by ကာရံဆူး at 2:22 PM4comments:
ကာရံရဲ့blog လေးကို စတင်လို့ ရအောင် စိတ်ရော လူပါ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ညီမငယ် ငှက်ကလေးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပထမဦးစွာ ပြောပါရစေ…ဘယ်ကမှန်းမသိ ဘယ်သူမှန်းမသိပေမဲ့ တကယ့်ကို စိတ်အရင်းခံနဲ့ကူညီပေးခဲ့တာကြောင့်ပါ…သူ့ ကြောင့် ကျွန်မလဲ online ပေါ်က မောင်နှမတွေက တကယ်ကို ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ စိတ်ကလေးတွေ ရှိပါလားလို့ တွေးရင်း လေးစားမိပါတယ်…
တကယ်တမ်းကျတော့ ကျွန်မက သူများတွေရဲ့အိမ်တွေကိုပဲ လိုက်လည်ရင်း အားကျနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ…ကိုကိုယ်တိုင် မဖန်တီးနိုင်သေးလို့ ..အားငယ်နေရင်း မနိုင်းနိုင်း စနေမှာ ငှက်ကလေးနဲ့စသိခဲ့ရတာပါ…ဒါတောင် ကိုယ့် အပြောမတတ်မှုကြောင့် ငှက်ကလေးက အထင်လွဲသွားသေးတယ်… တော်သေးတာက ငှက်ကလေးက စိတ်မဆိုးလို့ …ကျေးဇူးပါ ငှက်ကလေး…
အခုတော့ ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ ကျွန်မရဲ့ ရင်ဖွင့်စရာ နေရာလေးရယ် တိုင်ပင်စရာ သူငယ်ချင်းတွေရယ် အကြံတွေ ပေးမဲ့ မိတ်ဆွေတွေရယ်ကို ဒီနေရာမှာ ဆုံရမှာမို့ အတိုင်းမသိ ကြည်နူးမိပါတယ်…
အပြင်အဆင်တွေ သိပ်မလှသေးတဲ့ ကျွန်မရဲ့blog လေးကို နောက်များမှ အခွင့်သင့်သလို သူများတွေဆီက လေ့လာသင်ယူရင်း (ငှက်ကလေးကိုလဲ အားနာလို့ ) လှလှပပလေးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်သွားပါ့မယ်နော်..အခုတော့ အရမ်းရေးချင်တာလေးတွေကို မျိုသိပ် မထားနိုင်တော့လို့ဒီအတိုင်းလေးပဲ တင်လိုက်ပါတယ်…
Posted by ကာရံဆူး at 12:05 PM2comments: